मंगलबार १०-१३-२०७७/Tuesday 01-26-2021/	08:02 pm
– पूर्णप्रसाद मिश्र ,रासस
प्रश्न : ग्रामीण क्षेत्रको पुनःनिर्माणले गति लिए पनि शहरी क्षेत्रमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ? यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले के गरेको छ ?
प्रश्न : अर्को स्थानमा घर भएपनि झुक्याएर अनुदान लिई घर बनाएकालाई के हुन्छ ?
प्रश्न : स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ ? यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
शनिबार ११ पौष, २०७७ १४:२८:०० मा प्रकाशित